Bisha afraad iyo dhaqmada kala duwan ee tima tidcista - Amjambo Africa
Bisha afraad iyo dhaqmada kala duwan ee tima tidcista
Muuqaal qurxoon waxa ka imaadaa markii la isku daro qurax iyo isticmaalka waxa laisku qurxiyo.
Dhaqanka tima tidcista ama dabista waa dhaqan soo soo jireykumanaan sano kasokoo in ay tahay isqurxin waxay calamad utahay qabiilada kala duwan, iyo da’da uu jiro, in laqaba iyo in kala, dhaqaalaha uu haysto qofkaas, iyo heerka uu kajoogo bulshadaas tima dabista waxaa loo dabtaa xafladaha gaarka ah sida aroosyada, iyo dagaalada, iyo markaay xaflado kajiraan bulshada dhaxdeeda.xeris timaha markii ladabaayo qolo kasto si gaar ah ayay uxeretaa si looga kaso kumanaanka qabiil oo iska dhaxjira . waqtiga xaadirka timi dabista waxay noqteen mid laga helo macaash fara badn. Badnaa timaha waxaa dabtaa naagaha nimankana mar mar ayay dabtaan.
Dadka dagan Miane oo kasoo jeeda Afrika ayaa ku adkatey in ay helaan wax yaabaha timha lagu qurxiyo iyo meelo lagu hagaajyo timaha, tasoo hagaajin kara timaha Afrikanka ah. Waxay inoo sheegeen in ay saaxibadood weydiistaan ama Boston ubaxaan si timaha looga soo dabo ama meela kale si ay uhelaan meel timahooda looga daba. Waxaa jira meela fara kutiris ah oo Maine kuyaala oo sameen karaan timaha Afrikanka ah. Taasoo keenta in ay dadka wareeraan markii uu aroos jiro safafka oo dheeraada, dakda oo waqti badaan suga, waxaa kaloo dhibka keena in aya adaktahay in lahel shatigii timaha lagu jari lahaa ama lagu dabi lahaa. Naagahii xirfada ulahaa in ay laqabsan waayaan in ay Leysan kahelaan State Ka Maine.
Dumurka Afrikan ah waxay sheegeen dabista timaha in ay u fiicantahay xiliga qabooba ah taasoo ah in ay sadaxdii biloodba ay hal mar dabtaan ay ku qurux badanyihiin taasoo keeneysa in waqti safe gareeyaan iyo lacag. Timaha dadyowga cadaanka ah ayaa waxay ka fududyihiin kuwa Afrikanka ah waxaana loo sameen karaa si fudud. Timaha afrikanka ah waxay ubaahayihiin waqti badaan iyo xirfid. Dumarka waxaay jeclaan lahaayeen in ay arkaan meela badan oo timo lagu sameeyo dadka Afrikaanka ah oo kunool Maine waxay gaarayaan ilaa iyo 10,000, arintaan waxaay noqoneysaa mashruuc laga macaashi karo.
PreviousMashruuc magiciisa la dhoho Baskiilo loogutalagalay dhamaan dadka Maine degan ayaa bilaabayana xiliga 2019
NextFrom the Ground: Uganda & Rwanda